किन बामदेबलाई काँध थाप्दैछन् ओली ? प्रचण्ड र माधब नेपालसँगको सम्बन्ध सकिएकै हो ? – Setosurya
काठमाडौं । यस्तो लाग्छ कि वामदेव गौतम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का मुटु हुन् । उनी बिना नेकपा अगाडि बढ्नै सक्दैन जस्तो देखिएको छ । विशेष गरी पार्टी संगठनमा भन्दा पनि सत्ता संचालनमा वामदेव अहम् देखिएका छन् ।
त्यसैले त वामदेवलाई जहाँबाट भए पनि चुनावमा जिताउनु अहम् देखिएको छ । तर उनका लागि त्याग गर्ने नेकपाका सांसदहरु भने देखिएका छैनन् । पछिल्लो पटक काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
पार्टीको हाइकमाण्डले नै संकेत गरेपछि मानन्धरले पनि पार्टीको निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आफू राजीनामा गर्न तयार भएको बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
कहाँ कहाँ भयो चर्चा ?
नेकपा सचिवालय सदस्य गौतमलाई पहिले डोल्पाबाट चुनाव लडाउने तयारी गरिएको थियो । चर्चा खुवै भयो । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले आफू सिट छाड्न तयार रहेको तर स्थानीयसंग सल्लाह लिने बताए ।
बुढाले स्थानीय भेटेको बहाना गरे । तर त्यसअघि नै काठमाडौं हानिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्केको चर्चा भयो । ओलीले नै किन छाड्ने भनेर फर्किएको हल्ला पनि चल्यो ।
जब हाइ कमान्डले नछाड्न भनेपछि बुढाले स्थानीयले कुनै पनि हालतमा नमान्ने बताएकाले नछाड्ने उद्घोष गरे ।
त्यसपछि गौतमलाई कहिले दैलेख, कहिले नवलपरासी त कहिले बाँकेबाट चुनाव लडाउने तयारी भयो । उनका लागि ठूलो रकम खर्चेर सांसद भएकाहरु त्याग गर्न तयार भएनन् । अनि यो विषय सेलाउँदै गयो ।
वामदेव थाकेनन् । राजनीतिमा यो इच्छाशक्ति जरुरी छ । राजनीतिमा लाग्ने माग्ने मान्छे हारबाट थाक्दैन भन्ने प्रमाण वामदेव बनेका छन् ।
ओलीको टर्निङ ?
वामदेवलाई सांसद बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बन्दै गएको बुझिन्छ । यसअघिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वामदेव बर्दियाबाट नेपाली काँग्रेससंग पराजित भएका थिए ।
जबकि एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनले धेरैजसो स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । गठबन्धन नहुँदा समेत वामदेवले बर्दियाबाट जित्ने हैसियत राख्दथे । तर अप्रत्यासित हारे ।
वामदेवलाई हराउन ओली खेमाले निकै नै मेहनत गरेको चर्चा आयो । सफल पनि भयो । वामदेव स्तव्ध भए । छानबिनको माग पनि गरे । केही सीप लागेन । किनकि त्यो हाइकमाण्डको निर्देशानुसार भएको बताइयो ।
वामदेवको हारपछि ओली निर्विकल्प प्रधानमन्त्री भए । उनको विकल्प खोजिएन ।
वामदेव पार्टी एकता हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीका दावेदारका रुपमा हेरिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रका मध्यस्थकर्ताका रुपमा वामदेव रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य दावेदार हेरिएको थियो । दुई पार्टीका अध्यक्षहरुको विकल्प वामदेव नै थिए ।
अहिले एकाएक ओली परिवर्तन भएको बुझिन्छ । वामदेवलाई ल्याउन उनी सकारात्मक भएको संकेत मिलेको छ । स्रोतका अनुसार औपचारिक निर्णय नभए पछि अनौपचारिक छलफल तीव्र भएको छ ।
रामवीरले पार्टीको हाइकमान्डको निर्देशन मान्न आफू तयार रहेको जनाउ समेत दिएको बताइन्छ । राप्रपाका विक्रमबहादुर थापालाई ८ हजार मतले पराजित गर्दै रामवीर पपुलर मतका साथ विजय भएका थिए ।
त्यही पपुलर मत वामदेवले पनि पाउने आशा छ । तर ओलीको युटर्नलाई आश्चर्यका साथ हेरिएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असहयोग बढेकाले ओली अब आफ्ना पुराना भरोसालायक नेता वामदेवलाई नै विकल्पका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
प्रचण्डले भारत र चीनको भ्रमण आफू सत्तामा पुग्ने भर्याङ मजबुद पार्न गरेको र सिंगापुरमा बसेर भविष्यको ग्राण्ड डिजाइन बुनेको आशंका ओलीलाई छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै संसदमै असन्तुष्टिमात्र जनाएका छैनन् नेकपाको सचिवालय बैठकमै यो विषयले ठाउँ पाउँदैछ ।
शैक्षिक सुधारका लागि कुश्माको शिवालय माबि आवाशिय हुने
विश्वज्योतीमा शुभकामना आदानप्रदान
एमालेमा मुख्यमन्त्री चयन : डेन्जर जोनमा देखिए प्रदेश प्रमुख
के होला आज ? रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीबिचको छिनोफानो !
विराटनगर महानगरमा मतगणना सुरु, १ नम्बर वडाबाट खोलियो ‘महानगरको भाग्य’
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने : देउवा अलोकतान्त्रिक बने, नैतिकता भए तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ
प्रदेश नं. २ का १३६ मध्ये ७० वटा स्थानीय तहमा एमाले एक्लैले जित्ने देखेपछि काँग्रेस माओवादीको यस्तो तयारी
देउवा प्रतिको आम शंका : अब ‘स्क्याण्डल’ मच्चाउलान् कि कीर्ति राख्लान् ?
३१ स्थानको परिणाम आउँदा एमाले एक्लै १६ स्थानमा बिजयी, कांग्रेस ९, माओवादी ५ र राजमो १ स्थानमा बिजयी
रामचन्द्रले शेरबहादुरलाई यसरी झपारे, देउवाले दिए यस्तो जवाफ
यात्रा गर्दा ख्याल गरौ, बेनी–मालढुङ्गा सडक पनि दैनिक सात घण्टा बन्द
व्यापारको नाममा ‘अपराध’ व्यापारीलार्इ बाणिज्य मन्त्री यादवको यस्ताे चेतावनी ………
अपेक्षाकृत परिणाम नआएपछि कांग्रेसमा आरोप-प्रत्यारोप
६ महिनामै पर्वतकाे दाेबिल्ला-फलेवास सडककाे कन्तबिजाेग, पीच २ महिनामै भत्कियाे, २ सय मिटर भासियाे (तस्बिर सहित)…
हावाहुरीले विद्यालयको छानो उडाउँदा तीन विद्यार्थी घाइते
एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेका प्रचण्डले भने-माओवादी वर्तमान सरकारकै पक्षमा
माकुनेको लिखित असहमतिमा प्रम आेलीको कडा जवाफः के खोज्या हो, युद्ध की मिलाप ?
अहिलेसम्मकै रोचक केपी ओलीको जहाज भित्रै अन्तरवार्ता (भिडियो सहित)
भरतपुर महानगरमा मत च्यातेको विषयमा प्रचण्डलाई ओलिको यस्तो चेतावनी